University of Paris-Sud - Fianarana any Frantsa. Education in Europe
fanafohezan-teny : UPS
Aza adino ny ifanakalozy hevitra University of Paris-Sud
Misoratra anarana ao amin'ny Oniversiten'i Paris-Sud
Toy ny fikarohana amin'ny anjerimanontolo amin'ny maneran-pifehezana karazany,
University of Paris-Sud dia indrindra fantatra ho ny avo lenta ny fikarohana ny fototra, indrindra indrindra amin'ny matematika sy fizika. In Health Sciences, ny fikarohana efa nanana manan-karena sy ny vokatra eo amin'ny fitsaboana mahavokatra zava-baovao amin'ny maro ny fitsaboana saha. ny Lalàna, Toekarena sy ny Management ekipa hanatanteraka fikarohana tena tany am-boalohany ao amin'ny sehatra toy ny teknolojia vaovao sy ny zava-baovao. Farany, maro ny tetik'asa fikarohana interdisciplinary ihany koa nentina tany an-tsaha toy ny fanatanjahan-tena sy ny olombelona motricity, ohatra. Fikarohana izany asa rehetra atao ao amin'ny laboratoara izay zaraina ho an'ny ankamaroan'ny hafa amin'ny fikarohana lehibe ao anatin'izany fikambanana CNRS, Inserm sy cea, izay anjara dia be kokoa ny lazan'ny iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fikarohana nahafinaritra trano.
Paris-Sud University dia tsy fanta-daza noho ny fikarohana ihany, fa koa noho ny haben'ny sy ny isan-karazany ny antokony sy ny fandaharana,
na amin'ny akademika fitsipika ao amin'ny Bachelor, Mpampianatra, ary PhD haavon'ny, ary amin'ny fiofanana ara-teknika. Multidisciplinary fandaharam-pianarana amin'ny fampianarana tohanan'ny nanapaka-tsisin'ny fikarohana mitambatra amin'ny fampianarana vaovao mba handraisana maro samihafa ny mpianatra avy any vao tonga eo amin'ny taona voalohany ho an'ireo hanatanterahana fianarana mandritra ny fiainana. Programmes mifantoka amin'ny zavatra ilain'ny fiaraha-monina sy, na dia amin'ny doctorat ambaratonga, amin'ny fanofanana ireo mpianatra mba hiditra amin'ny tsenan'ny asa. Ny University ny miavaka velona sy miasa dia manome tontolo iainana ny mpahay siansa ireo mpianatra sy ny tanora amin'ny tsara indrindra ho an'ny toe-piainana nahazo fanjakana-avy-ny-zavakanto sy ny fahaiza-manao sy ny fahalalana mankafy ny fiainana mpianatra.
Amin'ny maha-rafitra amin'ny fakany ao amin'ny fiaraha-monina,
Paris-Sud University mamboly fifandraisana akaiky amin'ny orinasa sy manampy amin'ny asa famoronana amin'ny fahalalana niteraka araka ny mpikaroka. Ny Anjerimanontolo ihany koa ny manatanteraka hetsika fanentanana isan-karazany. Mety ho siantifika sy ara-teknika, na ny kanto, na izy rehetra mitambatra ny roa, mifanaraka amin'ny “Science-Kolontsaina-Society” asa izay ankehitriny no mandroso. Ary koa ny oniversite fiaraha-monina, ahitana mpiasa sy ny mpianatra, ny kendrena dia ahitana sekoly mpihaino sy ny ankapobeny.
Any amin'ny tontolo ara-tsiansa miavaka,
Paris-Sud University, niaraka tamin'ny hafa rehetra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana mpiara-miasa ao amin'ny faritra, dia miasa mba hampitomboana hisongadina iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny Paris-Saclay University tetikasa, izay dia mpilalao lehibe. Mandritra izany fotoana izany, drafitra ho an'ny fandaharam-trano be dia be no nanome Paris-Sud University miaraka amin'ny manam-paharoa afaka manamafy orina ny toerany eo amin'izao tontolo izao ny mpitarika oniversite sy ny manatsara ny antso ho amin'ny oniversite ny mpianatra, mpikaroka, sy ara-teknika ary ny fitantanana mpiasa. Ireo no olona izay mendrika ny voninahitra noho ny laza sy ny tsara an'i Paris-Sud University.
Faculty ny Lalàna, Toekarena sy ny Management
Jean Monnet Faculty manome ny fanabeazana sy ny fampiofanana ao amin'ny lalàna, toekarena sy ny fitantanana ny ny 6,000 mpianatra roa toerana, tombo-kase – Fontenay-aux-Roses sy Orsay.
Courses dia mitodika amin'ny asa-tsy manindry ny lalàna sy nampihatra ny fitantanana. Ny sasany amin'izy ireny no natao mba hihaona amin'ny ilain'ny hafa misaina, sekoly sy Institiota (siansa ara-pahasalamana, tontolo iainana sy ny fanatanjahan-tena).
Mifantoka amin'ny fikarohana fifanarahana lalàna, teknolojia vaovao lalàna, -bahoaka ny lalàna, Canon lalàna, zava-baovao sy ny tambajotra toe-karena sy ny fitantanana ny fandaminana.
Ny Institute of Fitsarana Fianarana manofana mpianatra ho fieken-keloka ho an'ny Versailles barany sy ny National Sekoly mpitsara (ENM).
4,200 mpianatra no niofana tao amin'ny Paris-Sud Faculty of Medicine tamin'ny toerana isan-karazany: ny Bicêtre, Paul Brousse sy Antoine Béclère Hopitaly, Gustave Roussy ny-Institute, ny Marie Lannelongue Fandidiana Center, ny Valley Foundation, ary ny Southern Ile-de-France Hospital Center.
Ary koa ny fiakarana ny fitsaboana, Manolotra ny Faculty enina Mpampianatra ny diplaoma sy antokony amin'ny telo doctorat Sekoly, ny Public Health Sekoly, ny Departemantan'ny Fitsipi-pitondran, ary ny Departemantan'ny Fampianarana Nursing.
Research Mizara ho pitsaboana fikarohana, natao any amin'ny hopitaly; fototra fikarohana, notanterahina in laboratoara; ary translational fikarohana, toy ny tetezana eo amin'ny roa.
Ny faritra dimy ao anatin'ny Haiaina Fahasalamana Science fitanana-dia: Cancer, Biotherapy / Immunotherapy / Transplantation, Physiopathology / Therapeutic lasibatra, Public Health / Epidemiology sy Medical fitarafana.
Ny Faculty ny Pharmacy fonenan'ny mpianatra, izay fonony 90,000 m2, any Châtenay-Malabry. Ny an-trano ny efa ho 3,500 mpianatra, izay 450 dia manaraka ny mahazatra taona voalohany nanjakan'i fianarana ho an'ny fahasalamana ny siansa. Nahazo diplaoma miasa dia afaka manantena ny hahita asa ao amin'ny fivarotam-panafody, dispensaries, orinasa, biolojia sy ny hopitaly.
Fikarohana voalohany ifantohana dia ny fitsaboana zava-baovao, ataon'ny ekipa sy ny laboratoara fantatra ho ny tsara indrindra amin'ny alalan'ny fikarohana lehibe sy ny fikambanana toy ny CNRS Inserm, ary ny Ministera misahana ny fikarohana.
Paris-Sud Faculty ny Pharmacy no iray amin'ny lehibe indrindra foibem-pikarohana akademika farmasia any Frantsa.
Misy ny 9,000 mpianatra ao amin'ny sampam-pianarana ny Siansa any Orsay, in Matematika, informatika, Fizìka, simia, Haiaina, eto an-tany siansa sy ny siansa ny Izao Rehetra Izao.
Amin'ny sampam-pianarana ahitana 47 fikarohana laboratoara, ny ankamaroan'izy ireo miaraka amin'ny CNRS, Inserm, Inra, Inria sy ny Curie Institute.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy ny tsara indrindra ao aminy fikarohana ao amin'ny matematika no valisoa roa medaly Fields, nahazo ny Wendelin Werner in 2006 ary Ngo Bao Chau Pirinty natao 2010; sy ny fikarohana ao amin'ny Fizika dia eken'ny ny loka Nobel, nahazo an'i Albert FERT in 2007.
Ny Faculty ny siansa dia hita teo am-fon'ny Orsay toeram-pianarana, toerana iray miavaka izay ahitana ny Botanical Garden.
Faculty ny Sport Sciences
Amin'ny akaiky 1,100 mpianatra, ny Faculty ny Sports Sciences (STAPS) manolotra maro asa-miompana taranja ho an'ny mpianatra izay efa manana mari-pahaizana, ary koa ny diplaoma sy arak'asa arak'asa Master ny fiakarana.
Fikarohana mifantoka amin'ny ara-tsaina, batana sy ny olombelona ao ambadiky ny dingana piarahamonina motricity izay mitana anjara tamin'ny fanatsarana ny fahombiazana eo amin'ny fanatanjahan-tena.
Izany no hany Faculty tany Frantsa mba manana doctorat Sekoly ho an'ny “Siansa ny Fanatanjahantena sy ny Human Motricity”.
Cachan IUT Maherin'ny 900 mpianatra, apprentices, ary ny fanabeazana bebe kokoa amin'ny mpiofana elektrika Engineering, Industrial computing, Mechanical Engineering sy ny Computer-Soritr'asa Manufacturing.
Nahazo diplaoma no nampiofanina hiditra amin'ny tsenan'ny asa maha teknisianina na injeniera mahay tany an-tsaha ny aeronautics, fitaterana, angovo azo havaozina, fitantanana ara-teknika fanorenana, domotics, fifandraisan-davitra, biomedical instrumentation, biomechanics, famokarana, fikarakarana, fampitaovana, Robotics sy ny indostria vokatra ara-barotra.
Mpianatra iray no tohanan'ny tena mahay fampianarana sampam-pianarana sy ny indostria matihanina.
Ny IUT dia fitaovana telo fanjakana-avy-ny-kanto sehatra teknolojia.
Ny Sceaux IUT Mampianatra ny 1,500 mpianatra raharaham-barotra sy ny fitantanana eo amin'ny fitantanana, fitantanana, sy ny varotra sy ny varotra injeniera. Ny laza tsara dia akaiky kokoa ny fifandraisana amin'ny orinasa dia mihazona sy ny raharaham-barotra. Ny asa-fandaharam-pampianarana mifantoka no ampianarin'ny ao amin'ny sampam-pianarana akademika sy ny fitantanana ny toekarena sy ny manam-pahaizana avy ao amin'ny fandraharahana izao tontolo izao.
Education Center fanampiny manolotra fiofanana ho an'ny isan-karazany diplaoma sy diplaoma.
Ny Orsay IUT dia mpitarika rafitra fampiofanana amin'ny simia, informatika, ka nampihatra Fizika sy ny fepetra.
Fitaovana miaraka amin'ny sehatra teknolojia efa mandroso indrindra, an-trano dia ny 1,100 undergraduates, apprentices sy ny fanabeazana bebe kokoa ireo mpianatra. Ny IUT dia manome fianarana / asa fiofanana efa-polo taona, noho ny fifandraisana akaiky amin'ny orinasa.
Fikarohana dia natao amin'ny telo laboratoara: ny Laboratory ny molekiolan'ny Analysis Instruments sy teknika (leti); Analysis ny Ara-toekarena Change, Teknolojian'ny fampahalalana, ary Companies (OFFICE); ary ny Laboratory ny interface Ny fomba fanaovana sy Fisarahan-toerana (INTERSEP).
Polytech Paris-Sud (Sekolin'ny Engineering)
Isan-taona ny 650 mpianatra misoratra anarana ao amin'ny Sekolin'ny injeniera tao Paris-Sud University. Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka ny Polytech injeniera dia mandritra ny fampiofanana izy ireo eo amin'ny fifandraisana akaiky amin'izao tontolo izao ny fikarohana, dia toy izany no nahazo ny fahalalana sisin'ny fandringanana amin'ny teknolojia avo saha (fitaovana elektronika sy nandinika lalina ny rafitra, herinaratra injeniera, solosaina injeniera, fitaovana injeniera ary phototonics), miaraka ny fifandraisana, teny, ary ny fitantanana ny fahaiza-manao rehetra injeniera filàna.
Ankoatra ny fandaharam-pianarana ny mahazatra, mpianatra izay manomboka ny fampianarana rehefa vita ny roa taona voalohany Mazava ho azy, Paris-Sud Polytech ihany koa dia manolotra ny fahafahana hahazo ny mari-pahaizana amin'ny alalan'ny fianarana akademika natambatra sy ny fiofanana, na amin'ny alalan'olon-fiofanako, na-tsy amin'ny alalan'ny fanabeazana bebe kokoa ny fandaharan'asa.
Taorian'ny Ady Lehibe 2, ny fitomboana haingana ny fizika sy simia nokleary dia midika fa mila fikarohana bebe kokoa sy matanjaka kokoa accelerators, izay ilaina sehatra lehibe. Ny University of Paris, ny Ecole Normale Supérieure sy ny Collège de France ireo nitady toerana rehetra akaikin'ny Orsay, any atsimo any Paris.
Ny Parc de Launay in Orsay (160 hektara) teo aloha ny Fanjakana.
Nanomboka ny fananganana ny Sekoly Momba ny Fizika Nokleary (Nokleary Physics Institute) ary ny Linear Accelerator Laboratory (Linear Accelerator Laboratory) ny maritrano Seassal, eo ambany fitarihan'ny Joseph ara-tsiansa pères, Irene sy Frederic Joliot-Curie sy Hans von Halban.
Ny College de France ny cyclotron, naorina 1937, Voatosika Orsay.
Ny voalohany rairainy ny vaovao Frantsay dia nanomboka accelerators miasa (ny 157 MeV synchro-cyclotron sy Linear Accelerator).
Ny Faculty ny Siansa any Paris nafindra sasany ny fampianarana asa ho Orsay. Ny fitomboan'ny mpianatra haingana nitarika ny Orsay Center lasa tsy miankina tamin'ny 1 Martsa, 1965.
Ny University of Paris-Sud 11 dia nanorina rehefa foibe tao Orsay, Châtenay-Malabry, tombo-kase, Cachan Kremlin-Bicêtre ary dia hatambatra.
Koa satria 1970
Nanomboka ny Orsay fonenan'ny mpianatra hampitombo ny Moulon lemaka sy ny laboratoara vaovao no naorina. Saika ireo rehetra anisan'ny Paris-Sud University, na dia vitsy kokoa ireo mifandray amin'ny CNRS manokana na amin'ny University of Paris VI.
Noho ny maha-akaiky an'i Paris-Sud University ny Angovo Atomika Institute (Cea) ary ny CNRS laboratoara any Gif-sur Yvette, maro ny toeram-pampianarana sy laboratoara, ary koa ny sekoly akademika toy ny Polytechnique, HEC, ESC, ENSTA sy olon-kafa koa tonga tao amin'ity faritra ity. Vokatr'izany, ny Vallée de Chevreuse Nanjary iray amin'ireo zava-dehibe indrindra, ary fantatra tsara faritra any Eoropa ho an'ny fikarohana ara-tsiansa.
Ianao ve mila ifanakalozy hevitra University of Paris-Sud ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
University of Paris-Sud ao amin'ny Map
Photos: University of Paris-Sud ofisialy Facebook
University of Paris-Sud Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Oniversiten'i Paris-Sud.